Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee heer Puntland oo sheegay in caqabado dhaqaale oo haysta ay hakad galisay hab u socodka doorashada aqalka hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGuddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee heer Puntland oo sheegay in caqabado dhaqaale oo haysta ay hakad galisay hab u socodka doorashada aqalka hoose
November 22, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer Puntland Khaliif Aw-cali. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee heer Puntland nabadoon Khaliif Aw-Cali oo shir jaraa’id ku qabtay caasimada Puntland maanta oo Talaado ah ayaa sheegay in caqabado dhanka dhaqalaaha ay haysato guddiga, taasoo uu sheegay in ay hakad galisay hab u socodka doorashada aqalka hoose ee Garoowe ka socda.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in haddii la xalin waayo caqabadaha dhinaca dhaqaalaha ah ee haysta guddiga doorashada ee heer Puntland ay joojin doonaan doorashada aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhanka kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in maalinta Isniinta ee asbuuca soo socda ay dib u bilaabmi doonto doorashada, isaga oo xusay in saddex xildhibaan doorashadooda la qaban doono maalintaas.
30-ka bishaan November ayaa qorshuhu ahaa in la doorto madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, balse taasi ma muuqato marka loo eego qaabka gaabiska ah ee ay u socoto hanaanka doorashada.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya Cumar Maxamed Cabdulle oo loo yaqaan (Cumar Dhagey) oo saxaafada kula hadlay shalay oo Isniin ahayd magaalada Muqdishi ayaa ka hadlay xubnaha xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ee lasoo doortay.
Cumar Dhagey ayaa sheegay in ilaa iyo hadda lasoo doortay 155 xildhibaan oo labada aqal ka kooban oo 20 kamid ah ay yihiin haween.
Xubnaha aqalka hoose ee lasoo doortay ayuu sheegay guddoomiyaha in ay tiradoodu tahay ilaa iyo 112 xildhibaan halka aqalka sarena ay yihiin 43 xildhibaan.
December 19, 2016 Daadad ugu yaraan labo qof ku dilay gobolka Nugaal
Guddoomiyihii guddiga doorashooyinka Puntland oo iscasilay
Somalia to host IGAD heads of states in September
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia will host next IGAD heads of states summit which is scheduled in September this year, President said. Somalia was given to host the summit after IGAD heads of states met in Addis [...]
Shir u dhaxeeya Wasiiradda Arrimaha Gudaha ee dowlad goboleedyada Soomaaliya oo ka furmay magaalada Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Shir u dhaxeeya Wasiiradda Arrimaha Gudaha ee dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa ka furmay gudaha magaalada Garoowe maanta oo Khamiis ah. Sida ay masuuliyiintu sheegeen, ujeedka shirka ayaa ah sidii la isku dhaafsan lahaa [...]